Nolosha Ukraine - Talooyin waxtar leh ardayda ku nool iyo waxbarasho ee Ukraine
Waxaan weydiiyay qaar ka mid ah ardayda ajinebiga ah ee ku saabsan ku nool Ukraine. Mid kasta oo iyaga ka mid ah u yeedhay mid xaqiiqda ku saabsan wuxuu ku noolaa dalka this.
Halkan waxaa ku qoran xaqiiqooyinka this:
1. Runtii waa mid ka mid ah dalka ugu jaban ee Europe ee. Tusaale: aniga iyo walaashay live wanaagsan (waayo, Ukraine) in guri 2 qol oo ay bixiyaan oo kaliya $100 bishii kirada. Halkan waxaa ku qoran badan oo adeegyada internet oo faa'iido leh oo kaa caawin kara helaan hoy magaalada ka mid ah Ukraine. Laakiinse mahad Center Admission Ukraine, in aad inoo caawin inay helaan hoy this, sababtoo ah ma doonayaan in ay ku nool yihiin hostel. Xitaa utilites yihiin kuwo aad u raqiis ah. Waxaan bixinta: internet cabel fiican, gaaska, biyaha, korontada iyo telefoonka. Oo waxaan ku bixin oo kaliya $30 – $40 bishii.
2. Waxaan ku qaataan oo kaliya $400 bishii. Laakiin waxaan kiro guri fiican ee xarunta of Kharkiv iyo mar kasta waxa ay dhinacyada maalmaha fasaxa. Ma u tudhin lacagta, waxay leeyihiin si joogto ah madadaalo, laakiin weli waa raqiis ah. Waxaan xitaa ku riday qaar ka mid ah lacag deebaaji, sababtoo ah ma u baahan tahay lacag aad u badan halkan sida aan ila qaaday. run ahaantii waan jeclahay dalka this.
3. Waxa aan jeclahay in Ukraine? Waan jeclahay cuntada laga gooynayaa way fiican taas oo ah mid aad u raqiis ah iyadoo jidka ag fadhida. Tusaalooyinka: Chicken lagu iibiyo by labada gabal ama dhan. Waxaa guud ahaan waddaa dhexeeya 35 si ay u 55 Grivnahs halkii kiilo. [At taariikhda of qoraal this, Doolarka Maraykanka ah oo qiimihiisu yahay 25 Grivnahs] Taasi waxey ka dhigantahay in yar ka dibna $2 halkii kiilo.] Miraha iyo khudaarta waa soo iibsataa, xataa si fiican, gaar ahaan marka xilli. Karootada agagaarka ordi 4.50 si ay u 6.50 Grivnahs for Kilo. In u dhiganta 25 cents halkii kiilo! Khudaarta waa gorgortan dhab ah iyo inta badan halkan of tayo sare leh. sida caadiga ah Theyre koray ee ciidda aad buu hodan u organic.
4. gaadiidka. Sidee waxay noqon kartaa si raqiis ah? Waxaan ku bixinayaa oo kaliya $0.25 halkii hal safar si уnd kale ee magaalada. Waxaan ku nool Kharkiv. Waxaan u tegey Kiev bishii la soo dhaafay in ay saaxiibaday. Waxaan bixiyo oo kaliya $15 USD safar hal dhinac. Mararka qaarkood gaadiidka gabowday, laakiin waa HORTA cheap. Waan ku jeclahay.
5. Ground, Ma aad aragto haweenka Ukraine? (Waxaan dhawray hadal qoraaga). Waxay yihiin kuwa ugu quruxda badan dunida. Haddii youre nasiib in ay guursadaan hal qalbi oo dahab ah oo aan ku dahab-digger, waxaa ka dhigi doonaa kuwa nool ee Ukraine loo sahlan, laakiin ma ay gebi ahaanba lagama maarmaan. Oo waa inaad xitaa aadan lahayn inay guursato wada nool. dalka wanaagsan!
6. Dadka degaanka wanaagsan eegto (sida caadiga ah) dul martida ama dadka deegaanka ka yimi dalalka kale. Tani ma aha inta badan kiiska ee dalal badan oo adduunka oo idil sidii horeba waxaa laga yaabaa inaad ka war! Tani waa faa'iido weyn!
7. Waa arrin aad u fudud si aad u hesho meelaha ay ka mid bedeli kartaa lacagaha ugu badan ay ka mid yihiin: xoreeyo. Doolar, ginni British, Rubles Ruush iyo, Dabcan, Euros. A lacagaha kale ee yar waxaa laga yaabaa in halkan ku badelay laakiin dhibcood sarrifka iyaga u ma yihiin si fudud loo heli karo. Kuwaas waxaa ka mid: Doolar Australian oo faranka Swiss ah.
8. Bank xiiso kaydka waa sareeyaa halkan! Waa arrin aad u fudud si aad u hesho codka iyo bangiyada istawooday, kaas oo bixin 20.5% dulsaarka lacagta maxalliga ah. Labada Raiffeisen (An Austria Bank oo sameeya ganacsiga halkan) iyo OTP (bangiga A Hungarian) waa kuwo lagu kalsoonaan karo oo si fudud loo heli karo in Ukraine. My waalidiinta dhacdo i soo diray ay lacag in la furo deposit iyaga u. fantastic. ATM waxaa laga heli karaa meelo badan oo magaalooyinka oo dhan. (Laakiin ma waxaad ka heli laga yaabaa in mid ka mid ah in uu leeyahay doorasho luqadda Ingiriisiga).
9. Waxaa jira dhowr Super Suuqyada wada gashaan magaalooyinka badan iyo sidoo kale suuqyada yaryar la tirin karin nooca furan oo laga dhaansado kala firdhiyey agagaarka xaafada kasta. Inkasta oo kala duwan oo la xadiday karaa, dukaamada waa sida caadiga ah meelo fiican si ay u iibsadaan alaabta joogta ah oo wanaagsan.
10. Waxaan dareemayaa ammaan iyo amaan halkan ka badan in kasta oo magaalada weyn ee America oo xataa habeenkii!
11. Daryeelka caafimaadka ee Ukraine (dadka deggan) waa lacag la'aan! Mid ka mid ah baahida bixiso kaliya ee daawooyinka iyo qalabka la xiriira ee loo baahan yahay si ay u maamulaan. Waxaan ognahay in ay tani waa run tan iyo markii aan lahaa munaasabadda si ay u isticmaalaan dhawaan for headackes a! Daryeelka ahaa xirfad iyo karti leh xitaa haddii aadan shaqaalaynta technology ugu dambeeyay ee laga heli karo meelo kale!
12. Estate Real Halkan lagu iibsan karaa (Dachias) waayo yar sida $4000 si ay u $5000! Dachia A sida caadiga ah waa meel ka soo yara magaalada ka wadan dejinta oo aan sida caadiga ah loogu talagalay maalinta nool kasta. A Dachia biyaha sida caadiga ah ayaa socda (caadi ahaan ku yaalla meel ka baxsan dhismaha) iyo korontada. Waxaa sida caadiga ah uu leeyahay oo kaliya ah-guriga ka maqnaan musqulaha. Laakiin waxay la casriyeeyay karaa si caddaalad ah raqiis. Inta badan waa waqti dhow bas-joogsiyada. Estate Real ee Ukraine ayaa la kulantay koror aan waaqici ahayn in qiimaha gartay ee la soo dhaafay gudahood 5 sano. guri dabaq ah, ku yaalla magaalada meesha aan ku noolahay, in iibin $5,000.00 5 sano ka hor oo hadda iibisa ilaa iyo mararka qaarkood kor ku xusan $40,000. A yaase u magacaabay iyo yar si ay ugu dhadhan Western aqbali weli weli fiican, guri yar kala duwan oo ku kici doona in badan ama in ka badan.
13. Waxaa sida caadiga ah sahlan looga heli karo deegaanka whod jeclaan si loo wanaajiyo kartida luqadda Ingiriisiga ay. Sidaas, ma ay adag tahay in la helo ardayda bixinta casharada English. Heerka socday waa 100 Grivnahs saacaddiiba! Ama ku saabsan $ 4.00 / saacaddii. codka Tani arkaan xiodhiidhada jacayl sida badan, laakiin maanka ku hayo in $4.00 tagaa badan oo halkan ka fog badan in badan oo dalalka kale! Tusaale ahaan, i kasban sanadka gudihiisa ah bixinta ujrooyinka in aan jaamacad.
14. Kuhadalka fiican in labada Ruush ama Ukraine ma loo baahan yahay si ay u maareeyaan waxyaalaha maalin walba sida shopping iyo safarka inter ama intra magaalada. Waxaan u maareeyaan si fiican oo ku filan on aniga ii gaar ah leh erayada a Ruush ah oo ku saabsan oo keliya 300 erayada.